कुस्मीसेरामा एक व्यक्तिको हत्या आशंका, चार जना, प्रहरी नियन्त्रणमा ! – ebaglung.com
कुस्मीसेरामा एक व्यक्तिको हत्या आशंका, चार जना, प्रहरी नियन्त्रणमा !
२०७३ माघ २०, बिहीबार १४:१८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७३ माघ २० । बागलुङ जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र रहेको कुस्मीसेरा गाविस- ८ ठाडाखेतको सडकमा एकजना अन्दाजी ४५ वर्षको व्यक्ति सडकमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । मृतक कुस्मीसेरा गाबिस वडा नं ५ बस्ने बर्ष ४५ को कृष्ण बहादुर थापा भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
समाचार श्रोतका अनुसार हिँजो दिउँसो कुस्मीसेरा सामरुम्टामा कुलपूजा भएको र दिउँसै देखी स्थानीय युवाहरुले मदिरा सेवन गरि रमाईलो गरिरहेका र पछी आपसमा विवाद र कुटपीट हुँदा निजको हत्या भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ । हिँजो साँझ थप मदिरा पिउन उनिहरु भीमबहादुर थापाको पसलमा गएका र आपसमा झगडा भएको बताईन्छ । झगडामा निज पसले पनि घाईते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।
हिँजो रातिसाढे ७ बजेसम्म उक्त स्थानमा शव नदेखिएको र राति आफन्तहरुले खोज्न जाँदा राति साढे ८ बजे तिर मृतकको लाश सडकमा देखिएकोले निजको हत्या गरी फयाँकेको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ । स्थानीयका अनुसार भीमबहादुर थापा, विष्णुबहादुर थापा र मृतक कृष्णबहादुर थापावीच झगडा भएको थियो ।
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा पसले भीमबहादुर थापा, विष्णुबहादुर थापा, ईश्वरी चापागाईँ र यादव शर्मा रहेका छन् ।
घटनाको सूचना पाए लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक अनिलकुमार खड्काको कमाण्डमा प्रहरी टोली कुस्मी सेरा पुगेर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
अहिले मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि धौलागिरी अन्चल अस्पताल ल्याईएकोछ ।
जापान नेपाली एकता समाज ओसाकाको क्षेत्रीय अध्यक्षमा कार्की !